Wararka Maanta: Khamiis, Oct 28, 2021-Madaxweyne Farmaajo oo sheegay inuu joojiyay heshiis kaste oo sharci darro ah oo lagu bixiyay dhulka dowladda
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in dowladdu baaritaan ku bilowday dukumenti sharci darro ah oo loo sameystay dhulalka Ciidanka Asluubta ee Ex Kontorool Afgooye, goobaha waxbarashada iyo dhul kale oo ku yaalla Suuqa Siinaay.
Iyadoo la tixgelinayo xilligan dalku uu u jiheystay doorashada, wuxuu madaxweynuhu sheegay inuu mamnuucay bixinta ruqsad ku saabsan isticmaalka si kumeel gaar ah ama abadiga ah ee berriga, badda iyo hawada sare ee Soomaaliya.
Wuxuuna madaxweynuhu sheegay masuulkii isku daya in uu bixiya ama la wareego dhulalka danta guud, in uu qaadayo masuuliyadda ka dhalata ku takri-falka hantida shacabka Soomaaliyeed.
Go’aankan kasoo baxay madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay inuu adkaynayo wareegtadii soo baxday 18kii Jannaayo 2018 ee la xiriirtay ku takri-falka iyo musuqmaasuqa dhulalka danta guud.
Hoos ka aqriso xeerka uu Madaxweyne Farmaajo soo saaray :-